वर्षाका कारण बर्जुमा लगाइएको स्ट्रवेरी खेतीमा १२ लाखको क्षति ! - Grameen Khabar
वर्षाका कारण बर्जुमा लगाइएको स्ट्रवेरी खेतीमा १२ लाखको क्षति !
२०७८ असार २४, बिहीबार ११:१६
विराटनगर, २४ असार । सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा लगाइएको स्ट्रबेरी खेतीमा वर्षाले ठूलो क्षति गरेको छ । बर्जु गाउँपालिका–४ हसनपुरमा आइएमएस एग्रो प्रालिले अढाइ बिघामा लगाएको स्ट्रबेरीको माउबोट ‘मदर प्लान्ट’ कुहिँदा १२ लाखको क्षति भएको इन्चार्ज दीपेश खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबारदेखि शनिबार बिहानसम्म परेको लगातारको वर्षाका कारण पानी जम्दा करिब ३० हजार माउबोट मरेका थिए । अझ, दुई सिजन उत्पादनको अपेक्षा गरिएको बोट मरेको र फर्स्ट जेनेरेसनको बेर्नालाई पनि प्रभाव पारेको खड्काको भनाइ छ ।
महँगो भएका कारण ग्रामीण भेगका मानिसले अन्य फलजस्तो किनेर खान सक्दैनन् । सहर केन्द्रित हुँदा पनि आधाजति उत्पादन बिक्री नहुने जोखिम बढ्छ । यस्तै भनाइ छ, कृषिमै अध्ययन गरेका इन्चार्ज खड्काको पनि । ‘धरान, इटहरी र विराटनगर गरी तीन स्थानमा धेरै ठाउँको स्ट्रबेरी बजारका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छन्’, उनले थपे, ‘गाउँमा बिक्री खासै हुँदैन, उही चाख्नका लागि मात्र हो । सहर केन्द्रित हुँदा कम्पिटिसन गर्न गाह्रो छ ।’ अघिल्लो सिजन आइएमएस एग्रोले करिब २०० क्विन्टलसम्म स्ट्रबेरी उत्पादन गरेको थियो । तर बजार अभावका कारण १२० किलोसम्म मात्र बेच्न सकिएको खड्काले जनाए ।
सुरुमा ६०० रुपैयाँ किलोले बिक्री भएपनि पछि बजार पाउन छोडेपछि पाँच सय हुँदै साढे चार सयसम्ममा बेच्नुपरेको उनले बताए । बजार अभावका कारण अघिल्लो सिजन ठूलो नोक्सानी ब्यहोरेको उक्त फर्मले यसपटक वर्षाका कारण ठूलो क्षति भोग्नुपरेको उनको गुनासो छ । अझ, पहिलो सिजन भएकाले बीमा नगरेको कारण पूर्ण रूपमा क्षति कम्पनीले नै ब्यहोर्नुपरेको उनले दुःखेसो गरे । कम्पनीले हाल बेर्ना उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसका लागि एग्रोा नर्सरीको निर्माणमा जुटेको छ । कम्तिमा ५० हजार बिरुवा नर्सरीमा राख्ने योजना एग्रोको छ ।